ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုခြိမ်းခြောက်ဦးမည့် TWENTY-THREE | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဂူအမ်ကျွန်းအရှေ့ဘက် မိုင် ၃၈ဝ ခန့်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း TWENTY THREE သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်ဦးမည့် စတုတ္ထမြောက် မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း WUND မှ ဖေါ်ပြထားသည့် ပုံတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
လာမည့် ၉၆ နာရီ – အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက် နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၂ CAT2မုန်တိုင်း အဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်သည်ဟု JTWC data များအရ သိရပြီး လာမည့် သောကြာနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် အဆင့် ၃ သို့ရောက်ရှိပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို အန္တရာယ်ပြုလာနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာဘွယ်ရှိကြောင်း WUND မှ ၅ ရက်စာ ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ပေးသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
လာမည့် ၉၆ နာရီ – အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက် နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၂ CAT2မုန်တိုင်း အဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: tropical-depression, tropical-storm, twentythree, weather. LeaveaComment »
« Watch LUPIT here
ယနေ့ညသန်းခေါင်တွင်မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် 23W »